Nagarik News - 'नीलो ताजमा नजर'
बिहीबार २५ बैशाख, २०७१
ब्युटी पेजेन्टमा सहभागी पहिलेदेखि नै हुँदै आएकी थिएँ। सन् २०१० मा आफ्नै समुदायको भएर मिस मंगोलमा सहभागी भएँ। यसले मोडलिङमात्रै होइन, अरू क्षेत्रका लागि पनि उत्तिकै फाइदा पुर्‍याउँछ भन्ने लाग्यो। मिस नेपालमा आफूलाई ...ग्रुमिङ' गर्न सहभागी भएकी थिएँ।
साझा बस जीपीएसमा
तपाईं सार्वजनिक यातायातका साधन कुरेर वाक्क हुनुभएको छ? छ भने साझा बसले तपाईंका लागि नयाँ उपाय ल्याएको छ। साझा बसले आफ्नो दुइटा बसमा जीपीएस सुविधा हालेर परीक्षण गरिरहेको छ। घरमै...
‘संगीत हलुका विषय होइन'
के गर्दै हुनुहुन्छ? दोस्रो एल्बम निकालेको १० वर्ष पुग्न लाग्यो। अब तेस्रोका लागि गीत रेकर्ड गरिरहेकी छु। कन्सर्टतिर गाइरहेकी छु।पहिला जनवादी गायिका भनेर चिनिनुहुन्थ्यो। अचेल बढी आधुनिक गीततिर लाग्नुभयो नि?२०४७...
मिकेल, डेनिस, मार्लेना र क्लाउडिया। यी चार महिला आफ्ना विशाल हिपका कारण संसारभर चर्चित छन्। उनीहरूका असामान्य रूपले चौडा नितम्बहरूको संयुक्त नाप हुन्छ– २७ फिट!
फिफा र एएफसीले आफ्ना कुनै पनि सदस्यमाथि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप स्विकार्दैनन्। केही महिनाअघि नाइजेरियाली फुटबल संघमा त्यहाँको सरकारले हस्तक्षेप गर्दा पनि फिफाले नाइजेरियाको सदस्यता निलम्बित गरेको थियो। नेपालमा पनि सरकारले...
सेक्सः किस्सा र प्रकरण
ओभलमा ओरल भलाद्मी मानिन्छन्, अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टन। शान्त स्वभावका उनी यौन मामिलामा भने 'उग्र' रहेछन्। उनले राष्ट्रपति कार्यालयकी कर्मचारी मोनिका लेविन्स्कीसँग शारीरिक सम्बन्ध कायम गरेका थिए। यही प्रकरणले उनले झन्डै...
त्यति सस्तो कहाँ छ र 'लिफ्ट'?
नौ कक्षामा पढ्दै गर्दा 'आँखाभरि आँशु किन', 'आउँदै गर मालती'जस्ता हिट गीतमा मोडलिङ गरेर धेरैका आँखामा परेकी शशी खड्का छ महिना यता कतै देखिएकी छैनन्। विगत सात वर्षदेखि मोडलिङ र...
प्रेम होइन, सजिलो त पाखण्ड हुन्छ
मैले कलेजमा आफूसँगै पढ्ने साथीसँग लामो समय प्रेम सम्बन्ध राखेपछि नै विवाह गरेको हुँ। तर, प्रेम सम्बन्धकै बारेमा धेरै दिमाग लगाएर घोत्लिएको भने छैन। एकताका ओशो पढ्दा उनले नित्सेका बारेमा...